Douglas Costa oo niyadjabiyay Robert Lewandowski kaddib markii uu ka doorbiday Cristiano Ronaldo – Gool FM
Dajiye October 21, 2020
(Munich) 21 Okt 2020. Douglas Costa ayaa ka xanaajiyay taageerayaasha kooxda Bayern Munich isagoo ku adkeystay in Cristiano Ronaldo uu aad uga fiican yahay xiddiga iyo gooldhaliyaha kooxda Bavarian-ka ee Robert Lewandowski.
Douglas Costa ayaa qaab amaah ahaan ugu soo laabtay kooxda Bayern Munich, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga Juventus, si uu u helo fursad uu ku ciyaaro kulamo badan.
Xiddiga reer Brazil ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan doonayay inaan ku laabto Bayern Munich muddo dheer…. aad ayaan ugu faraxsanahay halkan”.
“Waxaan marwalba laxiriiri jiray asxaabteydii hore sida Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Muller iyo Joshua Kimmich… waligey ma lumin xiriirkooda”.
”Waxa aan helay dalabyo kale ka hor inta aan ku biirin kooxda Juventus, waa koox weyn waana mid ka mid ah kooxaha ugu fiican yurub, waxaan doonayay inaan kula guuleysto Juve tartanka Champions League”.
“Laakiin nasiib ayaan lahaa maxaa yeelay wax badan ayaan la soo ciyaaray xiddigo waa weyn xirfadeyda sida Neymar oo xulka qaranka Brazil ah iyo Cristiano Ronaldo oo Juventus ah”.
“Hada waxaan la ciyaarayaa Robert Lewandowski, oo ah kan ugu fiican yurub, haddii aad kaliya fiiriso rikoorada, waxaad xaqiijin doontaa qiimahiisa… waxaana jira kaliya Cristiano Ronaldo oo ka sareeya”.